Miankina amin’izay vokatra avoakan’ny HCC kosa no hahitana hoe hiova ve io tarehimarika 8,84% azon’ity filoham-pirenena teo aloha izay ity.
Taorian’ny namangian’ny filoham-pirenena teo aloha, Marc Ravalomanana, ny Barean’i Madagasikara, kosa ka nanomezany ity ekipam-pirenen’ny baolina kitra ity lelavola mitentina 10 tapitrisa ariary ho solon-dranomboankazo an-dry Bolida sy ny namany dia nihaona tamin’ny Barea ihany koa ireo filoha hafa teo aloha. Tsy iza moa ireo fa ny filoham-pirenena, Hery Rajaonarimampianina sy ny filohan’ny tetezamita, Andry Rajoelina.
Zary lasa fitaovana iray mahomby entina handrangitana fifandrafiana sy adim-poko ankehitriny ny tambajotran-tserasera facebook. Misy amin’ireo mpandrangitra anefa, hoy ny mpikirakira iray no manova kaonty indray rehefa avy mahavita fandrangitana iray.